Weerar lagu qaaday laba saldhig oo ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ku leeyihiin dalka Mali. – Radio Muqdisho
Weerar lagu qaaday laba saldhig oo ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ku leeyihiin dalka Mali.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in guryaha ku yaal magaalada Timbuktu ay gariireen xilli 10 qarax oo waa weyn laga maqlay saldhig shan kiilo mitir koonfurta ka xiga magaalada.
Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 kale.
Warar halkaasi soo baxaya ayaa sheegaya in mid ka mid ah gawaarida lagu fuliyay weerrar lagu soo xardhay midabka gawaarida gaashaaman ee dalka Mali halka midka kalana loo soo ekaysiiyay gawaarida Qaramada Midoobay.
Mid ka mid ah gawaarida ayaa ku qarxay afaafka hore ee ilaalada saldhigga, waxaana uu burbur xooggan uu soo gaaray dhabbaha ay diyaaradaha ka duulaan amaba ay soo caga dhigtaan.
Afhayeen u hadlay howlgalka Qaramada Midoobay ee Mali ayaa barta Tweetarka waxa uu soo dhigay in weerrarka uu ahaa mid wayn oo culus, oo loo adeegsaday hoobiyayaal, rasaas culusna la is waydaarsaday islamarkana la rumaysan yahay in weerarka ay ku lug lahaayeen laba gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay.
Waxaa waqooyiga waddanka Mali 2013-kii loo daadgureeyey ciidammada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay kaddib markii ay halkaasi ay bartilmaameed u noqotay ururo xag jir ah oo uu ka mid yahay urur weynaha Al Qaacidda.
Dalka Mali ayaa la sheegay in uu yahay dalka ciidamada nabad ilaalinta ee ugu badan ay ku dhintaan guud ahaan caalamka.
Maamulka G/Banaadir iyo Taliska Ciidanka Booliska oo awaamiir ka soo saaray gaadiidka sumad la’aanta ah
WARMURTIYEEDKA SHIRKA WADATASHIGA WASAARADAHA WARFAAFINTA DALKA "DHAGEYSO"